ဟုတ်ကဲ့ သို့မဟုတ် အဘယ်သူမျှမ
မေးခွန်းများကိုမေးပါနှင့်အဖြေကိုရဖို့: ဟုတ်ကဲ့ သို့မဟုတ် အဘယ်သူမျှမ
မကြာခဏဘယ်လိုသင်, အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်လုံးဝမနေကြသနည်း သငျသညျမေးခွန်းများကိုမကြာခဏဘယ်လိုမေးသလဲ လူတိုင်းနီးပါးသောနေ့၌အနည်းငယ်မေးခွန်းများကိုမေးတယ်သူတို့အဖြေတွေကိုရချင်တယ်။ မကြာခဏလူရွေးချယ်မှုစေရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်။ ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်အဘယ်သူမျှမကဤအရှိဆုံးမေးခွန်းများ၏အဖြေကိုဖြစ်ကြသည်။ ဘာအဖြေကို yes သို့မဟုတ် no, မှန်ကန်သောဖြစ်သနည်းနားလည်ရန်ကဘယ်လို သငျသညျသံသယဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးရွေးချယ်မှုလုပ်မပေးနိုင်လျှင်, ထို့နောက်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖြေကို yes သို့မဟုတ် no ကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုမှထွက်ရှာပါ။ အဆိုပါ site ကို da-no.ru?lang=my မျှမကသင်သည်ဟုတ်ကဲ့ဖြေဆိုနိုင်သောမေးခွန်းများမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဆိုက်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရိုးရှင်းစွာအသင်၏မေးခွန်းရေးနှငျ့ "အမေး" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်ပြီးနောက်အဖြေဟုတ်ဖြစ်ရမည်သို့မဟုတ်လုံးဝမပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဖြေကျပန်းပေးအပ်ထားတယ်။ တဖန်သင်တို့လုံးဝဒီနည်းလမ်းကိုမယုံနိုငျသညျ။ သို့သော်! Service ကိုတုံ့ပြန်မှုဟုတ်သည် NO အဆိုပါဝန်လေးကိုကျော်လွှားနှင့်လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်စေရန်ကူညီပေးသည်။ သငျသညျအဖြေကိုရတယ်ဆိုပါက: အဘယ်သူမျှမ, ဒါပေမယ့်အဖြေကိုရဖို့ချင်ပါတယ်ဟုတ်သည်ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်သင်ယုံကြည်မှုကိုငါပေးမည်။ သငျသညျအဖြေကိုရဖို့လိုလျှင် NO ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ဟုတ်သည်တယ်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့မေးခှနျးကိုသငျသညျမှတဆင့်အမှုအရာထင်ဖို့နဲ့နေဆဲသင်တို့အဘို့အကျိုးရှိဖြေရှင်းချက်ယူဖို့ပိုအချိန်ငါဖြစ်စေမည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဝန်ဆောင်မှုဟုတ်သည် / NETvyzyvaet အံ့အားသင့်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်ကူညီပေးသည်။ အဖြေတစ်ခုလုံးဝကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်ပေးထားကြသည်ပေမယ့်။ မကြာခဏမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ရှေးခယျြမှုအစဉ်အမြဲကိုယ့်ကိုသင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ကို "yes သို့မဟုတ် no" ဟုအဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုတစ်ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်လုံးဝမရစေရပါမည်အဘယ်အရာကိုနားလည်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။